स्वार्थ मिलेपछि पौडेल नै विधान... :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, माघ १३
सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान मिचेको भनेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले के सम्म गरेनन्? पाँच पटक केन्द्रीय समिति बहिष्कार गरे।
केन्द्रीय समितिमा आफू पक्षमात्र होइन पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्न लगाए।
आफ्नै निवास बोहराटारमा छलफलका लागि पुगेका सभापति देउवाका कुरा सुनेकान लगाएनन्।
बरू पार्टी विधिसम्मत ढंगले चल्नुपर्छ त्यसका लागि विधानविपरीत निर्णय सभापतिले सच्याउनुपर्ने सुँगा रटान लगाइरहे।
पौडेलले कहिले महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्ज त कहिले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमा गुट भेला राखे।
बाहिर गुट भेला गर्दा सन्देश राम्रो नगएको भन्दै पार्टी कार्यालयमै भेला राख्ने निर्णय गरे।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामै जिल्ला सभापति भेला गरे। पुस २१ देखि तीन दिनसम्म ४५ जिल्ला सभापतिले पौडेलले डाकेको आफ्ना कुरा राखे।
जिल्ला सभापतिले समग्रमा पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनीहरूले पौडेललाई नै लक्षित गर्दै पार्टीभित्र हुने भागबन्डाको खुलेरै विरोध गरेका थिए।
यति लामो समयसम्म पौडेलले जे कुराको विरोध गरे, आफ्नो स्वार्थ मिल्ने बित्तिकै त्यही कुरा शिरोपर गरे। पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउनुपर्ने अडान डेढ महिना लामो अडान तुरुन्तै बिसाए।
मंसिर २६ पछि केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेका पौडेलसहित शीर्ष नेता गत शुक्रबार सभापति देउवा निवासमा पाँच घण्टा बैठक बसे।
यो बैठकमा पौडेल नराम्रोसँग चुके।
भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति गठन गर्दा ६० प्रतिशत हिस्सा संयुक्त रूपमा पौडैल र पूर्वमहामन्त्री सिटौला समूहलाई दिन सभापति देउवा तयार भएपछि नेविसंघको विधान मिचेको ख्याल राखेनन्।
गत वर्ष कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै पारित गरेको नेविसंघ विधानमा अबदेखि ३२ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने उल्लेख थियो। नेविसंघमा एक निर्वाचित र एक मनोनित गरी दुई जनामात्रै महामन्त्री बनाउन मिल्ने विधानत व्यवस्था छ।
तर देउवा निवासमा भएको छलफलमा एक सय २७ सदस्यीय नेविसंघ बनाउने र त्यसमा उपाध्यक्ष, महामन्त्री र सहमहामन्त्री विधानले कल्पना गरेभन्दा धेरै राख्ने सहमति भएका छन्। स्रोतका अनुसार भागबन्डा मिलाउनकै लागि नेविसंघमा नौ जना महामन्त्री राखिँदै छ।
सभापति देउवाले पूर्वउपसभापति रहेका सुनसरीका राजीव ढुंगानाको नाम सभापतिका लागि प्रस्ताव गरेका छन्।
देउवाले नेविसंघ सभापतिसहित तीन महामन्त्री आफूले राख्दैछन्।
नेविसंघमा रहने नौ महामन्त्रीमध्ये सभापति देउवा पक्षबाट तीन जना, वरिष्ठ नेता पौडेलबाट तीन जना, उपसभापति विजयकुमार गच्छदारबाट एक जना र पूर्वमहामन्त्री सिटौलाबाट दुई जना राख्ने गरी भागबन्डा गरिएको छ।
सभापति देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार नेताहरूलाई भागबन्डा मिलाउनकै लागि यति धेरै महामन्त्री राखिएको हो।
उनले नेविसंघको विधान सच्याएर मात्रै तदर्थ समिति गठन गर्ने पनि बताए।
‘नेताहरूलाई भागबन्डा मिलाउनकै लागि जम्बो नेविसंघ तदर्थ समिति बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘फागुन १४ मा स्ववियु चुनाव पनि हुँदैछ। तदर्थ समितिमा सबै पक्षलाई समेटेर राख्न सकियो भने स्ववियु निर्वाचन पनि नेविसंघको पक्षमा ल्याउन सजिलो होला कि भन्नेछ। अन्तरघात रोक्न सकिन्छ कि भनेरै यस्तो गर्नुपरेको हो।’
ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार नेविसंघका महामन्त्रीलाई फरक-फरक जिम्मेवारी दिइनेछ।
नेविसंघको ११ औं महाधिवेशन गत वर्ष गर्नुपर्ने हो। महाधिवेशन गराउन नसकेको भन्दै गत वर्ष माघमा तत्कालीन सभापति नैनसिंह महरलाई कांग्रेसले राजीनामा दिन लगाएर समिति विघटन गरिदिएको थियो।
आफ्नो कार्यकालमा ३२ वर्ष उमेरहद लागू गर्ने गरी विधान बनाएका नेविसंघ निवर्तमान सभापति नैनसिंह महर पनि अहिले विधान मिचेर नेविसंघ गठन गर्न लागेकोमा खुसी छैनन्। सभापति देउवा निकट रहेका महरले विधान मिचेर नेतृत्वले जम्बो नेविसंघ गठन गर्न लागेकोमा आलोचना गरे।
‘उमेरहद लागू नगर्ने हो भने किन विधानमा राखिराख्ने? संशोधन गरिदिए भइगो,’ महरले सेतोपाटीसँग भने, ‘मैले पहल गरेर नेविसंघ विधान समावेशी बनाएको हो। २०६४ सालदेखि नै विधान समावेशी बनाएको हो। अहिले जति मन लाग्यो उति महामन्त्री बनाउने हो भने विधान के काम भयो र?’
विधानकै अपव्याख्या गर्ने गरी पार्टी नेतृत्वले कदम चालिरहेको उनले बताए।
‘विधानकै अपव्याख्या हुने गरी जसरी क्रियाकलाप अघि बढेको छ यसले संगठनलाई फाइदा गर्दै गर्दैन,’ महरले भने।
उनले भागबन्डा मिलेपछि नेताहरूले विधान कुल्चेको पनि बताए।
‘आफूलाई मनपर्‍यो भने विधान कुल्चेर पनि अघि बढ्ने नेताहरूको कदमको विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘यस्ता निर्णयले संगठनलाई ध्वस्त बनाउँछ।’
गत वर्ष फागुनमै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति देउवालाई नेविसंघ गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो। देउवाले एक वर्ष हुन लाग्दा पनि नेविसंघ गठन गर्न सकेका छैनन्।
नेविसंघमा विधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेर निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले समूह पार्टी कार्यालयको ढोकैमा एक महिनादेखि रिले अनसन बसिरहेको छ।
रिले अनसन बसेका विद्यार्थी नेता मनिष सिंखडाले विधान मिचेर नेतृत्वले नेविसंघ गठन गर्न लागेकोले सोमबारदेखि आमरण अनसन सुरू गरेको जानकारी दिए।
‘कुन्दनराज काफ्लेकै नेतृत्वमा आमरण अनसन बसेका छौं। ३२ वर्षे उमेरहद जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले पार्टी कार्यालय ढोकैको रिले अनसन सुनेन। त्यसैले आमरण अनसन थाल्यौं।’
उक्त अनसन बसिरहेका विद्यार्थीमाथि देउवा समुहका विद्यार्थीले सोमबार दिउँसो आक्रमण गर्दा दुई विद्यार्थी घाइते भए।
‘सभापति देउवाकै अघि गमलाले हाने, ब्यानर च्यातिदिए’
नेविसंघ विधानअनुसार ३२ वर्षे उमेरहद लागू छ। ३२ वर्ष कटेकाहरू अधिवेशनमा उम्मेदवार पनि बन्न पाउँदैनन्। सोही विधानअनुसार २० भन्दा बढी जिल्ला अधिवेशनबाट नेतृत्व चुनिसकेका छन्।
यस्तै ३३ सदस्यीय पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कार्यसमिति एक सय एक सदस्यीय हुने नेविसंघ विधान छ। तर अहिले विधान मिचेर एक सय २७ सदस्यीय नेविसंघ बनाउन लागिएको हो।
नेविसंघमा मात्र होइन, विधान मिचेर पार्टीको विभाग संख्या पनि बढाइएको छ।
सभापति देउवा पक्षका केन्द्रीय समिति सदस्य मात्रै उपस्थित पुस ११ गतेको बैठकले २८ बाट बढाएर ४७ विभाग गठन गर्ने निर्णय गरेपछि पौडेलले सच्याउन माग राखेका थिए।
तर गत शुक्रबार पार्टी विभागबारे कुनै छलफल भएन। पौडेल पक्षले महाधिवेशनको मुखमा दुई हजार चार सय कार्यकर्ता आफूतर्फ आकर्षित गर्न सभापतिले कार्यकाल सकिने बेला विभाग गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएको थियो।
यी समग्र विषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्न सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। बैठकले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी निलम्बन गरिएको धारा उल्टाउने र जिल्ला अधिवेशनका कार्यतालिका हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १३, २०७६, १६:३१:००